Ego tiketi East Express 2020 | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraEgo tiketi East Express 2020
28 / 12 / 2019 06 Ankara, 36 Kars, Usoro okporo ụzọ okporo ụzọ, ụgbọ okporo ígwè, Eastern Anatolia Region, General, Isi akụkọ, SEO, Turkey
Ego tiketi East Express 2020: ọkachasị ewu ewu n'etiti ndị na-eto eto, East Express na-apụ na Ankara wee rute Kars site Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan na Erzurum. Eastern Express na-echere minit 5 - 10 na ọdụ ụgbọ ala, kwa ụbọchị site na ọdụ Ankara 17: 55wee rute n'ọdụ ụgbọ okporo uzo Kars na 18.30 n’echi ya. Enwere ngalaba 10 n'ụgbọala ụyọkọ na mmadụ 4 nwere ike ịga njem na ngalaba nke ọ bụla. TCDD Taşımacılık AŞ na-enye akwa akwa, ihe ndina na ohiri isi. Enwere ike iji oche dị na palọ ahụ dịka akwa ma ọ bụrụ na achọrọ. Enwere tebụl iri na anọ na oche 14-47 n'ime ụgbọ ala ebe a na-eri nri.
N'ihi ọdịdị mara mma nke ụgbọ ahụ, ndị njem na ndị na-ese ihe chọrọ East Express, nke bụ oge kachasi dị n'oge oge ọkọchị, njem na-ejikarị ụgbọ agha na-ebugharị ya. N'ime oge ọnwa oyi, a na-arịọ arịrịọ sitere na ndị ọrụ aka dị iche iche dịka ndị njem, ndị na-ese foto, ndị na-arị ugwu, ụmụ akwụkwọ mahadum na ndị nkuzi na-abụkarị nnukwu ụgbọ ala. Mmasị ndị otu a na-amalite na ngwụsị nke ọnwa Disemba ma na-aga n'ihu ruo etiti March.
Wgbọ nri abalị na East Express bụ tebụl maka mmadụ 4. Agongbọ a gụnyere nri ụtụtụ, ofe, nri na-ekpo ọkụ, sandwiches oyi na ọ hotụ hotụ ọkụ / oyi. Thelọ oriri na ọ restaurantụ doesụ ahụ enweghị oge mmeghe ọ bụla. Mepee 7/24.
Ndokwa Tiketi East Express
N'ihi mmụba na-abawanye na East Express, a na-etinye Touristic East Express, gụnyere naanị ụgbọ ala na-ehi ụra na ebe a na-eri nri. Ọ bụ ezie na East Express gara n'ihu na-enwe ezigbo mmasị, mgbakwunye nke ụgbọ ura na-ehi ụra na Touristic East Express na tiketi dị oke ọnụ maka ndị njem East Express na-adọta mmasị East.
Site na ịbịaru afọ ọhụrụ na ọbịbịa nke oge udu mmiri, a na-achọwanye ịrị elu na ọnụ ahịa tiketi.
Ankara Kars Touristic East Express Ahịa tiketi (Otu ụzọ)
Ahịa tiketi na-akwụghị otu ụgwọ otu ụzọ 480 pound, narị pound 600 maka mmadụ abụọ ka a na-enye maka ọrịre. A na-enye 20% ego maka njem njem ahụ na ndị na-azụ 'tiketi ndị na-eto eto' maka tiketi agbadaala. Ndị na-eto eto nọ n’agbata afọ 13-26 nwere ike irite uru na nzipu ego a ‘na-eto eto’. Na mgbakwunye, ndị nkuzi, ndị njem ndị agha, ndị otu dịkarịa ala, mmadụ iri abụọ, ndị nwere kaadị mgbasa ozi, ndị nwere nkwarụ, ụmụaka dị n’agbata afọ 12-12 na TCDD lara ezumike nka di na nwunye pasent 18, mgbanye pasent 20 karịa 65 na ndị ọrụ TCDD ndị njem anaghị akwụ ụgwọ. .
Ankara Kars East Express Pulman (oche) Ahịa tiketi
-eto eto £ 49.50
Ihe karịrị afọ 65 £ 29.00
Ankara Kars East Express Coaster Ticket Ahịa
-eto eto £ 69.00
Ihe karịrị afọ 65 £ 49.00
Ọnụahịa tiketi maka Express Express, Ankara-Kars Pulman (ya na oche) zuru 58.00 na-eto eto 49.50, karịa 65 afọ 29 TL. Bunks 78, ndị na-eto eto na karịa 60 afọ 69.50, 65 afọ na ụmụ 49.00 TL.
Eastern Express rụchara njem dị n’etiti Ankara na Kars n’ihe dị ka awa iri abụọ na anọ na nkeji iri atọ.
Akara Ịpụ Isi Kayseri pụọ Isi Sivas pụọ Ahapụrụ Erzincan Ahapụrụ Erzurum Fọrọ ụgbọ elu Kars
Mpụ si Kars Ahapụrụ Erzurum Ahapụrụ Erzincan Isi Sivas pụọ Isi Kayseri pụọ Ankara abịa
East Express Map na Stations
Okirikiri ala pụrụ iche nke East Express
Dogu Express Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị
Kedu ụdị ụgbọ oloko bu Eastern Express?
Dogu Express bụ ụgbọ oloko nke ụgbọ njem na-ebugharị na ebe a na-ere nri, nke TCDD Taşımacık AŞ na-arụ.
RayHaber Accessbanye na Map Expressger Integration nke akwadoro site na Pịa ebe a...
Kedu ihe bụ isi ebe Eastern Express na-akwụsị?
Ọ na-apụ na Ankara wee rute Kars site na Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan na Erzurum. Na-echere minit 5-10 na ọdụ etiti, Eastern Express na-apụ na Ankara Station kwa ụbọchị na 17.55 wee rute ọdụ ụgbọ Kars na 18.30 na-esote ụbọchị na-akwụsị na ọdụ ndị a:
Ego ole ka Express Express na-aga?
Ingga njem na Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars 1310 kmEmechaa ụzọ ahụ n'ime awa 24.5 (ụbọchị 1 n'ime nkeji 30), Doğu Ekspresi kwụsịrị n'ọtụtụ ọdụ ụgbọ ala. Ogologo ọsọ ọsọ, gụnyere nkwụsị, bụ ihe dịka 55 km / h. Oke kacha ruo ụgbọ oloko ruru 80 km / h.
Kedu kilomita ole na Eastern Express na-aga?
Daysbọchị ole ka Eastern Express na-ewere?
Kedụ ka Oge A ga-esi eji Egosipụta Ọwụwa Anyanwụ?
Eastern Express hapụrụ Ankara wee si Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan na Erzurum rute Kars. Eastern Express na-echere n’ọdụ ụgbọ ala maka nkeji 5 - 10, kwa ụbọchị site na Ankara Station 17: 55Ọ na-apụ na Kars wee rute n'ọdụ ụgbọ Kars na 18.30 n'echi ya.
Kedu ka ụzọ Express Express dị?
Eastern Express hapụrụ Ankara wee si Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan na Erzurum rute Kars. Eastern Express na-echere n’ọdụ ụgbọ ala maka nkeji 5 - 10, kwa ụbọchị site na Ankara Station 17: 55Ọ na-apụ na Kars wee rute n'ọdụ ụgbọ Kars na 18.30 n'echi ya. RayHaber Accessbanye na Map Expressger Integration nke akwadoro site na Pịa ebe a...
Kedu ka Kachasị Ebe E Si Nweta Ọpụpụ?
Gịnị bụ Eastern Express?
Dogu Express bụ aha nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè nke TCDD Tasimacilik AS na-arụ, na-aga Ankara gaa Kars site na Kirikkale, Kayseri, Sivas, Erzincan na Erzurum. Eastern Express na-echere n’ọdụ ụgbọ ala nke 5 - 10 nkeji, kwa ụbọchị site na Ankara Station 17: 55Ọ na-apụ na Kars wee rute n'ọdụ ụgbọ Kars na 18.30 n'echi ya. Enwere oche 10 dị na ụgbọala ochechechete na mmadụ 4 nwere ike ịga njem na ngalaba nke ọ bụla. Akwukwo, pique na ohiri isi bu nke TCDD Tasimacilik AS nyere, enwere ike iji oche dị na palọ dị ka àkwà mgbe achọrọ ya. Cargbọ ala ebe a na-eri nri nwere oche 14, oche 47-52.
Wgbọ erimeri na Eastern Express nwere tebụl maka mmadụ anọ ọ bụla. Cargbọ a na-eri nri gụnyere nri ụtụtụ, ofe, nri ọkụ, sandwiches oyi na ọ hotụ drinksụ ọkụ / oyi. Thelọ oriri na ọ restaurantụ doesụ ahụ enweghị oge mmechi. Mepee ọrụ ndị njem 4/7. Maka nkọwa Pịa ebe a...
Etu aga esi zụta Tiketi Trainụ nwere koodu HES
TCDD Taşımacılık A.Ş kesara vidiyo banyere otu esi enweta tiketi dị elu Train Train (YHT) na koodu nwetara site na ngwa Hayat Eve Sığar (HEPP). Na vidiyo ahụ, a na-agwakwa ụmụ amaala nwere “Asambodo Hapụ Njem” etu ha ga-esi nweta tiketi na koodu ha nwetara site na ngwa Hayat Eve Sığar (HEPP). Maka nkwupụta vidiyo na eserese Pịa ebe a...
Egwuregwu Tiketị maka Ndị njem njem nleta ọhụụ nke Newistic 2020
Ego tiketi maka East Express ugbu a
Mbido nke East Express 2020
Akwụkwọ nke abụọ Eastern Express ga-adị
TCDD tiketi - Ebee na otu esi esi zụta njem nlegharị anya East Express
Kedu otu esi zụta tiketi na Van Lake Express?
Ọnụ ego tiketi East Express
Ebe nkiri Orient Express
Tourism Eastern Express tiketi Ahịa
Taa na Akụkọ ihe mere eme: June 29, 1969 nwụrụ anwụ Eastern Express ruo mgbe Erzurum…